सबैलाई दिन को लागि खाना को उचित वितरण बारेमा adage थाह छ। नास्ता एक खाने शत्रु दिन, आफैलाई खान साथीसँग खाने साझेदारी मानिन्छ छ। तपाईं एक आहार मा हुनुहुन्छ भने तर कसरी खानाको योजना निर्माण गर्न? कसरी ठीक चयन गर्न एक स्वस्थ नाश्ता, वजन लागि भोजन र खाने, यो मामला मा विचार गर्नुपर्छ कस्ता सिद्धान्तहरू?
कि सामान्य वा खाजा र "साथीसँग साझेदारी" आवश्यक भोजन को यो भाग? त्यहाँ जे भए पनि वजन गर्न एक स्वस्थ नाश्ता छ? गरेको यस लेखमा यो कुरा गरौं।
खुसीको वा दुर्भाग्य, कारण व्यापक कम्प्यूटरीकरण (वा बरु, "connectedness") गर्न, जो कोहीले आज नेटवर्कमा एक लाख आहार पाउन सक्नुहुन्छ। प्रत्येक आहार चिकित्सा टिप्पणी संग प्रदान गरिएको थियो भने आहार मार्फत वजन कम गर्न को नौ बाहिर दस तरिका टिप्पणी :. "खतरा" हुनेछ सबै चरम विधिहरू मोनो-आहार, ती वा अन्य अत्यावश्यक पोषक वा भोकमरी अप्रिय परिणाम संग fraught छन् को इन्कार जस्तै वजन गर्न भनेर नबिर्सनुहोस्। द्रुत फिर्ती bygone किलोग्राम - दुई दुष्कर्मलाई को कम छ। धेरै बुरा, तपाईं छाला मा pimples को वा स्थलहरू हुनेछ शक्ति योजना को आवेदन पछि कपाल बाहिर पतन हुनेछ र नङ exfoliates भने, असहज महसूस पेट दुखाइ जस्तै हुनेछ। यो शरीर गरेको नकारात्मक परिवर्तन, भयो तपाईंलाई पालन जो को छानबिन गरेको हो।
कुनै पनि आहार सर्तहरू
तपाईं वजन खोने को प्रक्रिया सुरु गर्नु अघि, चयन गरिएको आहार तपाईं को लागि एक मानसिक परीक्षण खर्च। निम्न प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्:
म यो आहार मा भोक जाने, वा miniscule परिमाणमा खाना खान छ?
आहार मात्र एक उत्पादन (मोनो-आहार) खाने शामिल?
एक बाँणशैली आहार को विस्थापन एक उत्पादन (जस्तै, प्रोटिन वा चकलेट) को प्रयोग को पक्षमा छ कि छैन भनेर, छ, कि?
तपाईं माथि प्रश्न गर्न कम्तिमा एक सकारात्मक जवाफ दिन भने, तपाईंलाई थाहा - तपाईं इच्छित परिणाम हासिल छैन! साथै, यो रेकर्ड समय मा आहार पछि फिर्ता पाउण्ड गुमाएको, तपाईं पनि आफ्नो शरीर अबरोध।
मूल कुराहरु - आहार खाना
का सुरु गरौँ सही नास्ता। तपाईं आफ्नो शरीर र कसरी आदेश दिन जगाउन पहिलो भोजन: "म उठेँ र मिति तयार! today'll काम सँगै आऊ! "।
नास्ता छैन भने तपाईं आफ्नो जागिर वा काम जिम्मेवारी सुरु गर्न सक्षम हुने छैन, र खाने द्वारा निकास गरिनेछ। उपयोगी वजन लागि नास्ता विभिन्न तरिकामा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
चेतावनी! तपाईं चाँडै वजन हुनुको संग जानेबेलामा गर्ने अभिप्राय भने, यो खाने हरेस, तर नास्ता दिन छैन अप राम्रो छ।
खाजा सन्तुलित हुनुपर्छ। यो भोजन समयमा थियो, तपाईं कार्बोहाइड्रेट, (सही अनुपात मा) बोसो र प्रोटीन खान सक्छ। खाने को लागि, राम्रो रक्त शर्करा मा वृद्धि को मामला मा सबै व्युत्पन्न बोसो आफ्नो शरीर मा बोसो पसलहरुमा "को disposed" हो त, कार्बोहाइड्रेट नत्याग्ने।
र, पाठ्यक्रम, हामी नाश्ता भूल गर्न सक्दैन। अधिकांश मानिसहरू को दमनकारी भावना बिना सहज महसुस गर्न लागि तीन भोजन एक दिन पर्याप्त छैन "आफ्नो पेट मा चूसने।" खाजा सुकेको फल वा खट्टा क्रीम एक उसिनेर अन्डा, पनीर टुक्रा, पागल को एक मुट्ठी, केही सुकेको खुबानी वा छाँट्दछ सामान, ताजा फल हुन सक्छ।
दिन दायाँ सुरु
, वजन गुमाउन सबैभन्दा स्वस्थ नाश्ता के छ भने यो अवस्थित?
त्यहाँ पनि एक विकल्प छैन! त्यसैले सही breakfast- यो, ऊर्जा दिन खाने नगरेसम्म पूरा गर्न र शरीर मा heaviness सिर्जना हुनेछ कि खानाको छ। उदाहरणका लागि, वजन र क्यालोरी गुमाउने लाग्छ भने, तपाईं लागि दर - 1,500 क्यालोरी, त्यसपछि बी कुल ऊर्जा खपत को 30-40% कब्जा गर्नुपर्छ।
वजन कस्तो नास्ता उपयोगी, सही छ? व्यञ्जनहरु अंग्रेजी देखि - Unconditional दलिया दूध वा पानी मा उसिनेर, चीनी वा नुन संग।
यस नुस्खा सरल छ: पानी उम्लिरहेको मा (200 एमएल) खन्याउन दलिया राम्रो सबै भन्दा ठूलो। को porridge फोडे, यो हलचल र 10 मिनेट को लागि खाना पकाउन। Posaharite वा नुन। चीनी को सट्टा, तपाईं मह प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईंले अत्यन्तै न्यानो वा चिसो उत्पादनमा थप्नु, वा मह निको गुणहरू हराउछ।
यो विकल्प अर्थमा लागि, कुरा छैन, तपाईं एक आहार वा छैन बसिरहेका छौं बनाउँछ। दलिया - एक ढिलो कार्बोहाइड्रेट, पचाउन खाने नगरेसम्म पेट भर खिलाना र बिस्तारै हुनेछ जो, तपाईं ऊर्जा दिन हुनेछ। पहिलो यो संस्करण।
गुमाउन स्वस्थ नाश्ता गर्न वजन - दोस्रो विकल्प
उपयोगी (तर एकदम छैन आहार नास्ता) घिउ संग रोटी को स्लाइस को एक जोडी छलफल गर्न सकिन्छ, र अझ राम्रो बदाम मक्खन संग। तर सेतो पीठो गरिएका गैर-starchy खाद्य पदार्थ को सरल नियम नियालेर, र तपाईं आफ्नो फाइदा को लागि एक नास्ता तिर्नुपर्छ। राई, चोकर केक चयन - थप coarsely जमीन अन्न छ भन्दा, अधिक उपयोगी यो छ। यस्तो नास्ता के राम्रो छ? पहिले, तपाईंले heaviness को भावना छैन। एक स्लाइस वा वजन मा रोटी र मक्खन प्रकाश को दुई र थियो नास्ता, तपाईं एक बिट सुत्न ओछ्यानमा फर्केर जान चाहँदैनन्।
दोश्रो, एक हार्दिक नाश्ता तपाईं भोजन अघि भोक प्राप्त दिनु हुनेछ। प्राकृतिक, भन्दा औद्योगिक बोसो र सही कार्बोहाइड्रेट को संयोजन सबै भन्दा राम्रो बिहान खानाको लागि अनुकूल छ। वजन के अन्य स्वस्थ नाश्ता व्यञ्जनहरु उपचार गर्न सकिन्छ?
नास्ता प्रोटीन आधारित छ
प्रोटिन धेरै उपयोगी छ र बोसो र कार्बोहाइड्रेट भन्दा एक महत्वपूर्ण फाइदा छ - यो बिस्तारै पचा लिया जान्छ र अन्य पोषक भन्दा आधा क्यालोरी पाइन्छ। यो यस कारण लागि हो, अन्डा, कम बोसो मासु र पनीर अक्सर वजन चाहनेहरूलाई लागि शक्ति जग बनाउन प्रस्ताव।
खाना खाने Belkovosoderzhaschimi, तपाईं चाँडै भरियो। शीर्ष व्यञ्जनहरु स्वस्थ नाश्ता वजन लागि - यो छ:
भद्रगोल अन्डा (वा अन्डा) 2-3 अन्डा देखि। दूध र एक सानो पीठो (1 चम्मच) संग अन्डा हरायो। सबै भन्दा राम्रो मिक्सर Whisk। Raskalov पैन तेल चिकनाना र अन्डा मिश्रण खन्याउन। छैन एक पक्ष 10 भन्दा बढी मिनेट Sear।
खट्टा क्रीम वा सुकेको फल संग घरेलु पनिर एक सेवा। , घरेलु पनिर को 150 ग्राम लिन खट्टा क्रीम वा मह थप्नुहोस्। तपाईं पनि किसमिस वा कटा सुकेको खुबानी 3-4 टुक्रा को एक मुट्ठी लाउने प्रतिस्थापन गर्न सक्छ।
ताजा तरकारी र उबला चिकन संग स्यान्डविच। पानी मा एक चिकन (पानी जोश खाना पकाउने पछि 15 मिनेट) र हटान पानी र सुन्दर जोश। पातलो स्लाइस मा कटौती। चोकर रोटी, स्लाइस मा कटौती ले, thinly ककडी र टमाटर को स्लाइस कट, र शीर्ष मा रोटी राखे - एक चिकन।
धेरै नास्ता स्यान्डविच - यो उपयोगी छ? आंशिक! एक फैटी ससेज र पनीर रोटी को रूप मा कार्बोहाइड्रेट संग को संयोजन गर्न सहयोगी भएको तथ्याङ्कले वा स्वास्थ्य कि त छ भन्ने तथ्यलाई। तर तरकारी संग एक कम बोसो चिकन मा पनीर संग राई रोटी र ससेज मा सेतो आवारागर्दी ~ प्रतिस्थापन, र तपाईं वजन गर्न एक स्वस्थ नाश्ता प्राप्त।
एक राम्रो नास्ता के हो?
धेरै मानिसहरू जीवनको लागि निर्देशनहरू रूपमा nutritionists र उपयोगी चिकित्सा लेख को सिफारिसहरू र निर्देशित विज्ञापनहरु पालना छैन। त्यसैले, यहाँ दर्जा "छैन भन्दा स्वस्थ नाश्ता आहार" छ:
1 दही। सुन्दर जार र एक लामो समय को लागि स्टोर समतल मा बोतल धेरै बालिका र महिला लागि राम्रो नास्ता को सबै भन्दा राम्रो उदाहरण बन्न।
मीठो स्वादिष्ट मिठाई को 200-300 ग्राम खाने, आइमाइहरु तिनीहरूले आफ्नो शरीर र आफैलाई एक अनुमोदन गर्दै ठान्छन्। यो एक बिट छैन! वास्तवमा, एक मिठाई दही एक आहार पकवान छ। यसले रंजक, चीनी, थपिएको, "ताजा फल" को रूपमा लुकाएको समावेश रूपमा छ छैन उपयोगी, एक स्वादिष्ट मिठाई छ।
2. Muesli। दलिया उपयोगी छ, तर सबै भन्दा जो muesli, - यो खुशामदभरा फल खुशामदभरा गर्नुपर्छ, लाभ छैन र तपाईं वजन मदत गर्नेछ।
एक नास्ता गरेपछि वा दुई घण्टा भित्र, तपाईं फेरि खान चाहनुहुन्छ हुनेछ।
3। नाश्ता अनाज। निस्सन्देह, मकै र गहुँ पैड स्वादिष्ट यद्यपि, आफ्नो दूध खन्याउन कम्तिमा ड्राई खान्छन्। तर यो सामान्य मिठास, जो पछि तपाईं केहि poosnovatelnee चाहनुहुन्छ हुनेछ।
नास्ता के पिउन?
बिहान पानी एक गिलास सुरु गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। यसको लागि अपेक्षित नास्ता अघि बीस तीस मिनेट हुनुपर्छ पिउन। त्यसैले तपाईं आफ्नो शरीर दिन र सुरु गर्न चाहनुहुन्छ "उहाँलाई उठ।" केही पानी मह र कागती एक गिलास थप गर्नुहोस्। किन प्रयास र तपाईं छैन।
नास्ता के पिउन? यो चिया वा कफी हुन सक्छ, तर यो सबै केहि पिउन छैन राम्रो छ। तरल को गैस्ट्रिक रस पतला हुनेछ, र खाना खराब र अब को फलस्वरूप पचा लिया जान्छ गरिनेछ। आफ्नो मनपर्ने बिहान पेय नास्ता पछि बीस मिनेट पिउन।
कुनै आवश्यकता रस पिउन। केही छिटो कार्बोहाइड्रेट मात्र, आफ्नो तिर्खा मेट्न गर्दैन र केवल जगाउन वा भोक तीव्र मिलेर यो मीठो तरल। यो पनि छैन धेरै राम्रो पेय दूध छ - यो पाचन स्वस्थ slows तरिकामा कार्य। दूध अलग प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ।
नास्ता दिन को शुरुवात प्रतिनिधित्व गर्छ। सही खाद्य पदार्थ खाने, तपाईं ऊर्जावान र हँसिलो महसुस हुनेछ, र गलत नास्ता खाने तपाईं दुई पटक धेरै तिनीहरूले सकिनँ रूपमा खान भन्ने तथ्यलाई नेतृत्व हुनेछ।
उचित नास्ता एक आमलेट वा भद्रगोल अन्डा, पनीर, दलिया रूपमा मानिन्छ गर्न सकिन्छ। तपाईं वजन र एक स्वस्थ जीवन शैली नेतृत्व गर्न चाहनुहुन्छ भने दही, muesli वा crunches खान छैन।
गुणस्तर, जैतून तेल
Dyukanu मा आइसक्रिम - खुशी साथ पातलो बढ्न!
सबैभन्दा उपयोगी खाना: स्वास्थ्य र ताकत
टेस्टोस्टेरोनको स्तर कसरी वृद्धि गर्न
कसरी एक घर खरीद गर्न वा घर निर्माण
पेंशन बचत सौंपन? दर्जा पेन्सन कोष
कति चाँडो टिकट सिक्न
Cataract उपचार लोक उपचार
पेरिस Sorbonne विश्वविद्यालय: इतिहास, प्रसिद्ध स्नातकहरूको
साधारण Pheasant: वर्णन, खाना बानी, प्रजनन, र रोचक तथ्य